I-Condo entle kwiChibi leFlathead eneTubhu ye-Spa! - I-Airbnb
I-Condo entle kwiChibi leFlathead eneTubhu ye-Spa!
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguBrittany
Esi studio sihle siya kukwenza uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho eBigfork Montana. Igumbi le-spa le-spa lenza ubusuku bokuphumla emva kosuku olude lokuzihambela. Ifumaneka kwiLake Flathead, uyakonwabela iimbono eziphefumlayo kuzo zonke iifestile. Le condo icocekile, ihlaziywe kwaye inefenitshala ngokupheleleyo yiyo yonke into oya kuyidinga ukuqinisekisa ukuba uneholide ongalibalekiyo. Usebenza ekhaya? Kutheni ungakhe ube neholide xa uyenza? Ukunika ngaphezulu kwe-50% isaphulelo sokuhlala kwenyanga.
I-Condo ixhotyiswe ngekhitshi egcweleyo, imbiza yekofu, i-toaster, i-microwave, igumbi lokuhlambela le-spa, isomisi seenwele, intsimbi, ibhedi enkulu yenkosi, iilinen ezicocekileyo, i-cable TV, i-WIFI yamahhala, indawo yokuhlala.
Le condo ikumda wamanzi weFlathead Lake kwaye inendawo enkulu yengca ngaphandle ukuba uyonwabele. Kunye nemingxuma yoluntu yebarbecue enokusetyenziswa.
IBigfork yindawo yabakhenkethi kwaye yenze umsebenzi omangalisayo enikezela ngayo yonke iNW Montana kuwe. Ukusuka kwiivenkile zekofu zasekhaya, iivenkile ze-ayisikrimu, iivenkile zezikhumbuzo kunye neeresityu, awuyi kuhamba ngaphandle ngexesha lokuhlala kwakho. IBigfork inabemi abangaphezulu nje kwe-4,000 yabantu, kunye needolophu ezithandekayo.
IBigfork Main Street kukuhamba nje okufutshane ukusuka kwi-condo.
I-Bigfork yimizuzu engama-45 ukusuka kwi-Glacier National Park, ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka eFlathead Lake, imizuzu engama-20 ukusuka eKalispell, imizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGlacier, imizuzu engama-30 ukusuka ePolson, imizuzu engama-30 ukusuka eLakeside kunye neBlacktail Mountain Ski Area, imizuzu engama-40 ukusuka kwidolophu yaseWhitefish. kunye Big Intaba Ski Resort kunye 35 imizuzu ukusuka Columbia Falls.
Umamkeli uhlala imizuzu engama-20 kude nepropathi kwaye unokufowunelwa ngombhalo/ifowuni okanye i-airbnb.